Global Voices teny Malagasy » Iran : Nifarana tany amonja ny diam-panoherana nataona mpitondra fivavahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2008 21:28 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Zon'olombelona
Mpitondra fivavahana Iraniana antsoina hoe Ali Reza Jahanshahi no nosamborina tapabolana lasa izay, rehefa nanomboka ny diam-panoherana 960 kilometatra (590 maily) avy any an-tanna atsimon’i Iran Sirjan  ho any Teheran. Notoherin’ilay mpitondra fivavahana manko ny kolikolim-pakana tany tao Sirjan ary nitarainany ny fitondrana mahefa ho tsy miraika loatra amin’ity raharaha ity. Nosamborina i Jahnashahi raha vao nahavita 30 kilometatra akaikin’ny tanànan’i Abadeh .
Maro tamin’ny mpamaham-bolongana mpitahiry ny fahazarana Iraniana sy mpanohana ny repobilika Isilamika no nanambara ny fanohanany ity diam-panoherana ity, ary niantso ny mpitondra mahefa hamotsotra azy. Maro tamin’ireo mpianatra Isilamika sy mpitondra fivavahana tokoa no nanao fihetsiketsehana ho fanafahana azy. Maro tamin’ireo mpikambana sy mpamaham-bolongana ireo no mpikambana ao amin’ny Fikambanan’ny Mpianatra Mitady ny Rariny , vondrona Isilamika sy mpitandro ny fahazarana izay mitsikera ny mpitondra Iraniana ho tsy mihetsika loatra hiady amin’ny kolikoly.
Namoaka ny sarin’ilay mpitondra fivavahana maromaro  [Fa] ny mpamaham-bolongana Mostazafin (midika hoe ‘voateritery’ amin’ny teny Perisiana), izay nanaraka akaiky ny vaovao momba ity fanoheran’i Jahnashahi ity, ary nolazainy fa gazetin’ny mpianatra miisa 18 no namoaka fanambarana hanohanana ny diam-panoherana revolisionera ataony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/07/31/1200/
 Fikambanan’ny Mpianatra Mitady ny Rariny: http://www.edalatkhahi.ir/
 sarin’ilay mpitondra fivavahana maromaro: http://mostazafin.org/wordpress/?p=8